Puntland oo Soo bandhgtay Iiraaniyiin Sharcidaro ku kaluumeysanayay+Sawiro – SBC
Puntland oo Soo bandhgtay Iiraaniyiin Sharcidaro ku kaluumeysanayay+Sawiro
Ciidamada Badda Puntland ayaa ku soo bandhigay Xero ay ku leeyihiin magaalada Boosaaso 78 nin oo u dhashay Dalka Iiraan 12 nin oo Soomaali ah iyo shan doonyood oo ay ka soo qeybteen xeebaha dhaca duleedka magaalada Boosaaso gaar ahaan deegaanka Qaw.
Col C/risaaq Diiriye Faarax taliyaha Ciidamada Badda Puntland ayaa saxafada u sheegay in kooxdan Iiraaniyiinta ah ay soo qabteen iyagoo si sharci daro ah uga kaluumeysanaya xeebaha Puntland.
Waxa uu Taliyuhu ka hadlay sidoo kale 12 nin oo Soomaali ah kuwaas oo uu sheegay in ay ku hubeysnaayeen hubka noocyada Fud fudud iyo qoryaha 3g ah iyagoo ilaalo ka hayay kooxdan qaabka sharci darada ah uga kaluumeysanayay xeebaha Badda Puntland.
Muuse Geelle Yuusuf Faroole Wasiir ku xigeenka wasaarada kaluumeysiga iyo qeyraadka badda ee Puntland ayaa isana ka hadlay goobta isagoo sheegay in dowladu ka go’antahay la dagaalanka kooxaha jariiflayaasha balse ay jiraan dad howlshaas qabaan u ah dowladuna talaabada ku haboon ay sida ugu dhaqsiyaha badan ka qaadeyso.
Howlgalkan ayaa noqonaya kii ugu horeeyay oo jariiflayaal tiro inta la soo qabtay oo kale ah lagu soo qabto waxaana ay sheegeen saraakiisha ciidamada badda Puntland in ay sharciga horgeyn doonaan si talaabo sharci ah loogu qaado.